Avv. Mahdi Mohamed Gulleid (Khadar) ayaa maanta ka qayb galay munaasibad lagu xusayay Sanadguuradii 48-aad – idalenews.com
Ra’iisalwasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Avv. Mahdi Mohamed Gulleid (Khadar) ayaa maanta ka qayb galay munaasibad lagu xusayay Sanadguuradii 48-aad ee kasoo wareegtay Aasaaskii xarumihii Daryeelka Agoonta iyo Saboolka Soomaaliyeed oo ka dhacday Xarunta Taliska Ciidamadda Asluubta ee magaaladda Muqdisho.
R/Wasaare xigeenka dalka, Wasiiro, Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Taliyaha Ciidamadda Asluubta iyo Madax kale ayaa ka qayb gashay Munaasibadaasi.
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Avv. Mahdi Mohamed Gulleid (Khadar) oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in siyaasadda taageerida iyo taakulaynta Carruurta Agoonta ah ee Soomaaliyeed uu Dawladda ku hogaaminayo Madaxweynaha Dalka Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo.
”Farxad weyn ayay ii tahay inaynu maanta markale daahfurayno Xarumihii Daryeelka Agoonta iyo Saboolka, waxay tani tusaale u tahay horumarka dhinaca nabadda aynu ka gaadhnay iyo inaynu u fikirayno in carruurteena agoonta ahi helaan daryeel ku filan. Waxaynu ku shaqaynaynaa siyaasadda uu inagu hogaaminayo Madaxweyne Farmaajo oo ah in loo gurmado dadweynaha Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan guud ahaan caalamka lana taakuleeyo oo la taageero bulshaweynta Soomaaliyeed ee gudaha ku tabaalaysan.” Ayuu yiri R/W ku-xigeenka Soomaaliya Md Mahdi.
R/w ku-xigeenka ayaa sheegay in Dawladdu ka jawaabayso codsiga Taliyaha Asluubtu ku sheegay in taageero lagu siiyo daryeelka carruurta Agoonta ah ee Soomaaliyeed wuxunna yiri; ”Xukuumaddu waxay aqbashay dhawaaqii Taliyaha Asluubta ee ahaa in la taageero agoonta lagana qayb qaato daryeelkooda, waxaynuna ka wada shaqayn doonnaa in miisaaniyad iyo kharash loo qoondeeyo.”
Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Dalka oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dhawaaqay in Mushaharkiisi bishan Maarso uu shaqsiya ku taageerayo carruurta Agoonta ah ee Soomaaliyeed.
”Shaqsiyan ka R/W ku-xigeen ahaan waxaan bishan Maarso Mushaharkaygii ugu deeqay Caruurta agoonta ah ee Soomaaliyeed, si aynu isugu dhiirigelino daryeelka carruurta Agoonta ah.” ayuu yiri R/W ku-Xigeenka Soomaaliya Mahdi Mohamed Gulleid.